Adobe Social iyo Adobe Cloud Suuq geynta | Martech Zone
Khamiista, Diseembar 13, 2012 Khamiista, Diseembar 13, 2012 Douglas Karr
Markuu Adobe sameeyay iibsiga Omniture, waxaan ka walaacsanahay inay iska quusan doonaan Analytics hore iyo alaabtuba waa ku lumi lahaayeen qalabkooda daabacaadda. Maaddaama aan la shaqeyneyno macaamiil aad u tiro badan oo aan aragno Adobe Digital Suuq-geynta Suite oo si dhab ah isu soo uruuriyay, waxaan billaabayaa inaan beddelo muwaadinkeyga. Tijaabada & Bartilmaameedka waa barxad weyn iyo isdhexgalka bilaa cillad la'aanta ah iyo isticmaalka guud ee falanqaynta ayaa ka dhigaya mid lama huraan ah.
Waxa ku soo xiga waa Adobe Social. Haddii aad tahay isticmaale Adobe Analytics, Adobe Social waa wax badan oo fulin khasab ah.
Adobe Social waa hal shey oo lagu maareeyo howlaha suuq geynta bulshada dhamaadka ilaa dhamaadka - laga bilaabo iibsashada xayeysiinta, u daabacida taageerayaasha iyo kuwa raacsan, wadista kaqeybgalka iyo cabirka natiijooyinka ganacsiga. Waxay u taagan tahay oo keliya hal xal oo loogu talagalay howlaha aasaasiga ah ee suuqgeynta bulshada ee ganacsiga, laakiin waa shey leh faa iidada is dhexgalka Adobe Suuq Cloud si loo keeno cabbiro fara badan iyo kanaal isku dhafan. Laga soo bilaabo Adobe blog.
Adobe wuxuu liis garayaa waxtarka badan ee Adobe Social:
Muuji baraha bulshada ROI - Ka gudub wixii jecel iyo saamiyada adigoo ku xiraya nashaadaadka bulshada qiyaasaha ganacsiga iyo aqoonsashada isdhexgalka bulshada ee saameeya dabeecadda iibsiga iyo qiimaha sumadda.
Ku hagaaji suuqgeyntaada aragtida dhamaadka-ilaa-dhamaadka ee macaamilka - Isticmaal fikradaha bulshada si aad si fiican ugu fahamtid dhaqdhaqaaqa macaamiisha iyo isbeddellada. Shakhsi ahaan khibradaha suuqgeynta si aad u gaarto qofka saxda ah
leh nuxurka saxda ah.
In kor loo qaado hufnaanta howlaha maamulka bulshada - Ka faa'iideyso nidaamyada shaqo ee heer shirkadeed si ay ula macaamilaan dhagaystayaasha adduunka oo dhan ugana jawaabaan wadahadalada macaamiisha maxalliga ah iyaga oo dheellitiraya xakamaynta iyo maaraynta maamulka ururka oo dhan.
Tags: adobe suuq geynta suuq geyntaadobe bulsheedfalanqaynta warbaahinta bulshada